नयाँ स्क्रिम टिभी शो चरित्र अपडेटहरू
घर हरर मनोरन्जन समाचार नयाँ स्क्रिम टिभी शो चरित्र अपडेटहरू
by व्यवस्थापक अप्रिल 7, 2014
द्वारा लिखित व्यवस्थापक अप्रिल 7, 2014
स्क्रिमको टिभी संस्करण अन्ततः उनीहरूको पाइलटलाई कास्ट गर्दै र शूटि is गर्दैछ। TVLine क्यारेक्टर वर्णन समातेको छ जुन स्क्रिप्ट कास्टिंगको लागि प्रयोग गरिने छ। चलचित्रसँगै अनुसरण गर्दा, स्क्रिम टिभी श्रृ series्खलामा अधिकतर किशोर पात्रहरूको कास्ट भएको देखिन्छ।
हार्पर डुवाल: एक १-बर्षे सुन्दरता "जो एक सानो तात्पर्य र बौद्धिक सामाजिक पुतली हुन पनि" तर यसको बावजुद लोकप्रिय भीडले उनलाई आफ्नो हुन एक जनाएको छ। "उनी दोषी महसुस गर्छिन् कि उनी पहिलेका मिल्ने साथी ऑड्रेबाट टाढा गएकी थिइन," तर कमसेकम उनको आमा गोगीको साथ 'गिलमोर गर्ल्स'-एस्क सम्बन्ध भयो जुन उनको समझदार रहन्छ।
अड्रे जेसन: हेपरको भूतपूर्व BFF "लुथरन पादरीको दुई उत्सुक छोरी" को रूपमा वर्णन गरिएको छ जो "सुन्दर भन्दा बढी पक्राउमा देखिन्छ।" यो "आर्नर एक्लो" एक फिल्म निर्माता बन्ने सपना देखाउँछ र टेक प्रतिभा नूहसँग घनिष्ठ सम्बन्ध साझा गर्दछ।
नूह फोस्टर: अड्रेको नजिकको कन्फिडेन्टे "रचनात्मक, उत्कृष्ट र टेक-प्रेसिसी हुनसक्दछ अर्को स्टीव जॉब्स हुन।" उसको लागि भाग्यशाली, उनीसँग हास्यको ठूलो अनुभूति भएको छ ("एक ला जोन क्युस्याक इन टीन प्राइम") जसले उसलाई उसको हाई स्कूलको हलहरू नेभिगेट गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसबाहेक नूहसँग “पुस्तकहरू, चलचित्रहरू, टिभी, अनुप्रयोगहरू, इत्यादिहरूको ज्ञानकोष” रहेको छ।
मार्गरेट "मैगी" डुवाल: हार्परकी आमा, उनको -० को बीचको उमेरमा, शहरको मेडिकल परीक्षक हुन्, "एक परिपक्व विज्ञान गीक जसले उनको सुन्दरतालाई खेल्छन्।" हार्परको बुवाले उनीहरूलाई त्यागे भन्ने तथ्यको लागि मेगीले धेरै समय खर्च गरेकी छिन्। ओह, र उनी "आफ्नो विगतको अन्धकार गोप्य" बोक्दै छिन्।
जिल ब्लोटेभोगल द्वारा लिखित (रेभेन्सवुड, हार्परको टापु, युरेका), पाइलट एक युट्यूब भिडियो भाइरल भइरहेको साथ सुरू हुन्छ, जसले चाँडै किशोरावस्थाको लागि समस्या निम्त्याउँछ अड्री र लाग्ने रूपमा कार्य गर्दछ। "एक हत्याको लागि उत्प्रेरक जसले [उनको] शहरको समस्याग्रस्त विगतलाई झ्याल खोल्यो।"
तपाईको विचारमा टिभी कार्यक्रममा स्क्रिम परिणत भएको कुरा के छ? हामीलाई टिप्पणीहरूमा थाहा दिनुहोस्।
र तपाइँ सबैको लागि यहाँ सुपर फ्यानहरु चीखाहरु। यो अद्भुत संग्रह जाँच गर्नुहोस्:
सबै चारै SCREAM फिल्महरू विशेष कलेक्टरको संस्करणहरूमा समावेश गरिएको छ, SCREAM2का कलेक्टरको संस्करण मात्र यो बाकस सेटको साथ उपलब्ध छ। एउटा विशेष डिस्कले पर्दाको पछाडि दस्तावेजी, स्क्रीन टेस्ट, आउटटेक्स, र एक विशेष कटि Cut कोठा सुविधा दर्शकहरूलाई घरमा दृश्यहरू सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ। DVD-ROM सुविधाहरूले एक स्क्रीनसेभर, ट्रिभिया खेल, स्क्रिनप्ले र शट सूची समावेश गर्दछ।
खरीद गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
हरर टेलिभिजनएमटीवीश्रृंखला श्रृंखला
हर्षोल्लास भिडियोले तपाइँको इच्छा के छ 'द वॉकिंग डेड' मा भयो भन्ने देखाउँदछ!
हलिस्टन हेर्नुको १० कारण: पूर्ण दोस्रो सत्र